Colaad ka dib Kolombiya: Laga soo bilaabo Havana ilaa fasallada - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Colaad ka dib Kolombiya: Laga soo bilaabo Havana ilaa fasallada
March 14, 2016 Warar & Muuqaal 0
Qoraal qoraaleed ayaa muujinaya joogitaanka mooryaanta aagga Naasa. (Sawir: Demotix / Joana Toro)
Carolina Meza Botero
(Maqaalka asalka ah: Carolina Meza Botero, opendemocracy.net, Maarso 9 2016)
Wadaxaajoodyada u dhexeeya gobolka iyo Xoogagga Kacaanka ee Kolombiya (FARC), iyo suurtagalnimada in la saxiixo heshiis - iyo, sidaa darteed, furitaanka xilli colaadeed ka dib - ayaa in badan oo naga mid ah ka dhigay Colombia inay ku riyooto dal cusub. Si loo xaqiijiyo riyadan, rajo badan ayaa inta badan la galiyay waxbarashada. Laakiin markay tahay soo-jeedinta waddo cad oo loo maro waxbarashada xilligii colaadaha ka dib, su'aalo ka badan jawaabta ayaa soo baxa. Sidee ayey waxbarashadu gacan uga geysan kartaa wada-xaajoodka xallinta khilaafaadka iyo sidii loo gaari lahaa xasillooni iyo nabad waarta oo laga helo Kolombiya?
Dadku waxay ku qaataan inta badan carruurnimadooda, qaan-gaarnimadooda iyo, gaar ahaan dalalka horumaray, qaan-gaarnimadooda hore fasal. Sababtaas awgeed ayaa ah in wax kasta oo iskuulada ka dhaca ay door muhiim ah ka ciyaaraan isugeynta jiilalka mustaqbalka. Hawsha dhismaha waddan nabadeed waxay u baahan tahay dib-u-eegis lagu sameeyo noocyada kala duwan ee rabshadaha dhaqanka - oo la fahmay, sida ay sheegtay Galtung (1990), iyada oo loo marayo siyaabaha loola xiriiro dadka kale ee gacan ka gaystay sii noolaanshaha isku dhacu. Dareenkan, dadaal kasta oo lagu dhisayo nabada waa inuu ku daraa waaxda waxbarashadda si ay ugu sahlanaato isbadalada dhaqan ee uu dalku u baahan yahay marka uu qarka u saaran yahay saxiixa heshiisyada nabada. Waa kuwan fikradaha qaarkood ee ka yimaadda si dhow ula shaqeynta xarumo waxbarasho oo badan oo ku yaal Kolombiya.
Wax ku oolka ugu dhakhsaha badan uguna dhakhsaha badan ee waaxda waxbarashadu waa inay naga caawisaa inaan rumaysanno in xalka wadahadalka ee khilaafka uu yahay sida ugu wanaagsan ee waddan nabad lagu dhisi karo. In kasta oo dad badani u arkaan xalka gorgortanka inuu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee ugu macquulsan, haddana dareen ballaadhan oo la wadaago oo ku saabsan kalsooni darrada labada gorgortan, FARC iyo dawladda, iyo fulinta heshiisyada nabadeed, ayaa hadda ka jira Kolombiya. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay jabinta taariikh dheer ee labada jilaa, laakiin sidoo kale aqoon la'aan ku saabsan geeddi-socodka iyo waxa lagu gorgortamayo - jahwareerka ka dhashayna waxaa sii xoojinaya qaybahaas bulshada reer Kolombiya ee ka soo horjeedda geeddi-socodka. Intaas waxaa sii dheer, in badan oo reer Colombia ah, maadaama tani ay tahay geedi socod ay ficil ku sameysay dowladda, waa shaqadeeda inay soo marto. Tani waxay u tarjumaysaa awood-siin hoose iyo mid muwaadin, oo ka duwan fursadaha badan ee ay bixiso.
Caqabada ayaa ah in carruurta iyo dhallinyartu ay fayl gareeyaan kana baaraandegaan shakigan oo ah kalsooni darro loo qabo gobolka iyo siyaasadda, iyo gaar ahaan wadahadal oo lagu xaliyo khilaafaadka. Dabcan, siyaasadda laguma wacdiyi karo fasalka dhexdiisa, laakiin fasalka waa in laga dhigaa agora looga wada hadlo arrimaha taagan, si looga doodo horumarka laga sameynayo wadahadalada, si loo milicsado saameynta ay ku leeyihiin dalka iyo, wax walba ka sarreeya, ee isbeddelada saxiixa heshiisyadu macnahoodu noqonayo nolosha ardayda. Ku darsiga, si kastaba ha noqotee, waa inuu intaas ka sii dheeraadaa. Hay'adaha waxbarashadu waxay leeyihiin suurtagalnimada inay tusaale weyn u noqdaan xallinta khilaafaadka nabadeed, taas oo ah waxa ka dhigi kara wadahadal maalinle ah mid fudud. Haddii ay suurtagal tahay in la joojiyo isku dhac galaaftay kumanaan kun oo qof fadhiisasho iyo wadahadal, maxaa diidaya in lagu sameeyo guriga ama goobta lagu ciyaaro ee lagu xaliyo khilaafaadka yar yar? Ka sokow, haddii annaga, ka bulsho ahaan, aan dooran lahayn inaan u soconno waddada halganka hubaysan, waa inaan ka fekernaa tusaalaha aan siin doonno jiilalka soo socda.
Wadahadalada nabadeed waxay sidoo kale caqabad ku noqdeen awooda reer Colombia ee ah inay riyoodaan oo ay rajo yeeshaan. Sanado badan oo colaado ah iyo iskudayo nabadeed oo badan oo fashilmay ayaa raad qoto dheer ku reebay awooda muwaadiniinta si loo qiyaaso wadan ka duwan. Taasi waa, awoodda aasaasiga ah ee isbeddelka bulshada iyo gaaritaanka himilooyinka nolosha. Mid ka mid ah waxtarka ugu muhiimsan ee nidaamka waxbarashadu sameyn karo ayaa ah in laga caawiyo dhalinyarada inay abuuraan rajo wanaagsan oo ku saabsan mustaqbalka dalka loona oggolaado inay ku riyoodaan inay, iyagoo ku saleysan damacooda iyo kartidooda, ay runtii isbeddello waaweyn ku sameyn karaan deegaanka. Wax ku biirintani waxay tusineysaa ka caawinta carruurta, dhalinyarada iyo xirfadleyda mustaqbalka abuurista mashaariic nololeed oo ku saleysan sharci iyo nabad taas oo gacan ka geysan karta dhismaha dalka dib loo cusbooneysiiyay ee aan ku riyooneyno Waxbarashadu waa inay ballaarisaa fursadaha dhammaan dadka reer Kolombiya, oo ay siisaa qalab shaqsiyeed iyo mid xirfadeed si looga dhigo shaqsi keliya, laakiin riyooyin wadareed oo la hirgelin karo Dabcan, tan laguma gaari karo dadaallada waaxda waxbarashada oo keli ah: fursadaha dhabta ah, marka laga hadlayo xagga shaqooyinka iyo waxbarashada, waxaa loo baahan yahay in loo abuuro dhammaan dhalinyarada dalka.
Wadamada ku guulaystay inay si guul leh uga gudbaan khilaafaadka qalafsan sida kuweena waxay ku dareen nidaamyadooda waxbarasho dib u eegis muhiim ah oo taariikhdooda ah. "Fahmitaanka taariikhda, si aan dib loogu celin" waxay ka dhigan tahay in la aqoonsado waxa ina wada qabtay dal ahaan iyo waxa noo horseeday heerarkii ugu xumaa ee waxashnimada. Waxbarashadu waxay gacan ka geysan kartaa abuurista milicsiga muhiimka ah ee dhammaanteen aan ka ciyaarnay taariikhdaas. Tan macnaheedu maahan inay ardaydu bartaan taariikhaha iyo magacyada kumanaan xasuuq, laakiin waa inay falanqeeyaan sababaha iyo doorka ay yeelan karaan jilayaasha kala duwan ee isku dhaca. Waxa kale oo muhiim ah in dib loo eego iyaga kiisaska iska caabbinta rabshadaha iyo dhismaha nabadda ee shakhsiyaad iyo dad aad u tiro badan, taas oo muujineysa waxa ay awood u leeyihiin reer Colombia. Waa arrin u adeegsiga barista taariikhda barxad looga wada hadlo doorka carruurta iyo dhallinyartu ku yeelan karaan dhismaha nolol maalmeed nabdoon iyo ugu dambeyntiina, qoritaanka baal cusub ee taariikhda Kolombiya. Barnaamijyada caalamiga ah, sida Ku wajahan taariikhda iyo nafteena, waxay soo bandhigaan casharo muhiim ah oo ka caawin kara nidaamka reer Kolombiya inay ka fekeraan habab wanaagsan oo wax loo baro taariikhdeenii hore, maanta iyo mustaqbalkeena suurta galka ah.
Qodobka kor ku xusan wuxuu xiriir dhow la leeyahay waxa, sida ay ila tahay, mid ka mid ah waxtarka ugu muhiimsan ee nidaamka waxbarashadu sameyn karo: abuurista dhaqan is cafin iyo dib-u-heshiisiin jiilasha cusub. Colaadda ayaa ka dhigtay dhammaan dadka reer Colombia inay shucuur ahaan u baqo, ha ahaadeen dhibanayaal toos ah iyo haddii kale Cafiska wixii dhacay wuxuu u baahan yahay dhisid faham cusub oo xaqiiqda ah taas oo noo oggolaaneysa inaan ka guuleysanno saameyntooda xun ee nolosheena. Waa arrin gacan ka geysaneysa sidii loo bogsiin lahaa nabarrada shucuurta leh ee colaaddu ka tagtay, sida aan dadka kale u aragno, xiriirna u dhisno, u dhageysano kuwa naga duwan, iyo is aaminno iyo hay'adaha dimoqraadiyadda Danesh (2008), machadyada waxbarashadu waxay noqon karaan goobo lagu bogsado markay noqdaan goobo dadku si furan ugala hadlaan sida isku dhacu u qaabeeyey, waayo hawshan waxay bilaabayaan inay ogaadaan in xanuunka iyaga la wadaagaya kuwa kale, iyo khadka kala qaybinaya inta udhaxeysa dhibbanayaasha iyo dhibbaneyaasha uma cadda sida ay moodeen, iyo in annaga oo qaangaar ah aan nahay kuwa ugu baahida badan cafiska iyo dib-u-heshiisiinta, si aanan ugu gudbin uguna baqeynin, nacaybka iyo ciilkeenna jiilalka cusub. Abuuritaanka dhaqanka iscafinka iyo dib uheshiisiinta iskuulada waxaa kamid ah in caruurta iyo dhalinyarada la baro sida loo fahmo loona maareeyo shucuurtooda, in la muujiyo naxariis iyo sheegasho, iyo in la barto saamaxa, weydiisashada cafiska, iyo in la saxo khaladaadka la sameeyay.
Ugu dambeyntiina, dugsiyadu waa inay u heellan yihiin inay muwaadiniinta wax u baraan nabadda. Tani waxay tusineysaa in la beddelo aragtida adduunka ee qiil ka dhigta rabshadaha, abuurista jawi meesha xalka nabadeed ee khilaafaadka uu yahay mid caadi ah, iyo halka khilaafaadku ku wada noolaadaan wada noolaanshaha. Martín Baró (1990), oo ku shahiiday dagaalkii ka dhacay El Salvador, wuxuu yiri "militariynta nolosha bulshada waxay abuureysaa xagjirnimo maskaxeed oo horumar leh." Kolombiya, tani waxay ka muuqataa dhinacyada dahsoon ee nolol maalmeedkeenna - sida khilaafaadka loogu xalliyo qoysaska dhexdooda, lamaanayaasha dhexdooda, shaqada, bulshada dhexdeeda iyo, dabcan, xaaladaha waxbarashada. Waxaa lagu muujiyay luuqadeena iyo habka aan uur ku qaadno cadaw ahaan kuwa u fekera si ka duwan. Caqabad weyn ayey ku tahay nidaamka iskuullada Kolombiya maanta inay su’aal ka keenaan dhaqankan iyo inay bartaan inaan si nabad ah ugu wada noolaan karno inkasta oo aan ku kala duwan nahay. Waxbarashadu waa inay u adeegtaa ujeeddada ka caawinta ardayda inay bartaan waddooyinka kale ee loo maro rabshadaha si loo xalliyo khilaafaadka.
Intaas waxaa sii dheer, dugsigu waa inuu u oggolaadaa waayo-aragnimada hore ee faa'iidooyinka dimoqraadiyadda marka la eego heshiisyada dhismaha iyo xaaladaha caddaaladda ee dhammaan. Si taas loo gaaro, hay'adaha waxbarashadu waa inay tusaale u dhigaan. Qofku wuxuu wax ku bartaa wuxuu qofku sameeyo iyo waaya-aragnimadiisa, laakiin ma aha wax aad u badan waxa uu maqlo ama xafido. Sidaa darteed, waxa run ahaantii muhiim ah waa barashada sida looga qayb qaato ficil ahaan. Abuuritaanka dhaqan nabadeed waa samaynta ballanqaad siyaasadeed oo ku saabsan rabshad la'aan iyo caddaalad, iyo in loo arko wadahadal iyo kaqeybgal sidii habab lagu gaaro xaalado nololeed oo wanaagsan bulshada oo dhan.
Colaadda Kolombiya waxay ku faafisay xadgudubyo ka dhan ah kooxo badan oo dad ah. Iskuulku wuxuu door muhiim ah ka ciyaari karaa burburka kaalimaha jinsiga ee soo jireenka ah, oo dagaalka lagu xoojiyay. Iskahorimaadku wuxuu reebay calaamado qoto dheer oo ku saabsan aqoonsiga Kolombiya qaran ahaan - xiriirka ka dhexeeya dadka reer Colombia iyo taariikhdooda, qoysaskooda, degmooyinkooda iyo gobollada ay ka soo jeedaan. Waxaan u baahanahay inaan waxbarno jiilalka cusub si ay ugu hanwayn yihiin inay halkan ku dhasheen. Tani waxay muujineysaa in la aqoonsado waxa kheyraadka iyo waaya-aragnimada nabadeed ay noo ogolaadeen in aan wada joogno dalka, ka hadalka khibradaha aan soo marnay iyo xaalado badan oo aan diidey in aan qirno, iyo in la abuuro istaraatiijiyado aan ku celcelin iyada oo loo marayo si qaawan oo waxbarasho dareen leh.
Ugu dambeyntiina, dhismaha waddan nabadeed wuxuu sidoo kale u baahan yahay in loo beddelo goobaha waxbarashada goobo nabadgelyo u leh carruurta iyo dhallinyarada, si looga ilaaliyo rabshadaha mustaqbalka, suuqyada sharci darrada ah, iyo shaqooyinka dambiilayaasha ah. Dagaalada ka dib, bulshooyinku waxay maraan xilli kala guur ah oo markhaati ka noqon kara falal la mid ah, ama ka xun, rabshado, iyadoo kooxaha loo sameeyay inay ka faa'iideystaan ​​faaruqinta awoodda ay reebeen xoogaggii hubeysnaa - kooxahaas oo raadinaya qaabab ay ku soo ceshadaan mudnaantii luntay , iyo kuwa kale oo, oo ay keeneen dareemo ciqaab la'aan ama aargoosi, ay doonayaan inay caddaaladda gacmahooda ku qaataan. Dugsigu waa inuu noqdaa meel bixisa kahortaga shaqaalaynta mustaqbalka, hoy nabadeed, iyo meel soo jiidasho leh oo loogu talagalay qoysaska, carruurta iyo dhalinyarada inay ku nagaadaan.
Waxbarashada, marka la soo koobo, waa in loo tixgeliyaa isbeddel muhiim ah oo lagu gaaro heshiisyada iyo dhisidda waddan nabad ah. Isbedelada waaweyn ee dhismaha ee lagu heshiiyay Havana si dhaqso leh ayey u libdhi doonaan haddii aynaan qaadin geeddi-socod weyn ee isbeddelka dhaqanka. Bulshooyinka waxbarashadu way ciyaari karaan waana inay door hoggaamineed ka ciyaaraan howshan - dartiis Colombia cusub oo aan dhammaanteen ku riyooneyno.
Baro, M. (1990). Psicología social de la guerra. San Salvador: Iskuxirka UCA.
Danesh, HB (2008). Abuuritaanka Dhaqan Bogsiineed ee Bulshooyinka Mutiethnic: Qaab Isku-dhafan oo Looga Hortago iyo Ka Hortagga Rabshadaha - Xaaladaha Cudurka Leh. Joornaalka cilmu-nafsiga bulshada, Vol. 36 (6), 814-832.
Galtung, J. (1990). Rabshadaha Dhaqanka. Joornaalka Cilmi baarista Nabadda, Vol. 27, No. 3, 291-305.
Carolina Meza Boterois oo ah cilmi-nafsi iyo falsafad ka tirsan Jaamacadda Andes (Bogota, Kolombiya) oo haysata shahaadada mastarka ee cilmu-nafsiga bulshada iyo dhaqanka kana qaadatay Iskuulka Dhaqaalaha iyo Sayniska Siyaasadda ee London. Cilmi-baare aagga colaadda ka dib iyo nabad-dhisidda ee Fundación Ideas para la Paz.
# isbedelka khilaafaadka
# khilaaf kadib
Xarunta Peres, UNESCO waxay ku biireen xoogag
Review of Hawlaha Waxbarashada Nabadda ee Pakistan
Hindisaha Iska Horkeenida Dhisida: Ka Guurista Ka Sii Gudbinta La'aanta
Waxaa laga yaabaa 9, 2018 CV 0
U Guuritaanka Ka-Dhex-dhexaad la'aanta ayaa ah horumarinta fursadaha barashada internetka ee sahamiya ikhtiyaarrada dhabta ah ee lagu xaddidayo dhaqdhaqaaqyada isku dhaca wax halaagga ah ee sida caadiga ah wiiqa awoodda aan u leenahay ilaalinta danaheena. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada oo fure u ah xallinta khilaafaadka
June 28, 2018 opinion 0
Waxbarashadu waa xalka ay tahay in dhisayaasha nabada ay tixgeliyaan, nabada sameeyayaashuna waxay waxbadan ka baran karaan barayaasha sida loo badalo dabeecada aadanaha. [sii wad akhriska…]
YIHR waxay raadineysaa Khabiir ku takhasusay Dhismaha Nabadda iyo Waxbarashada (Kosovo)
June 25, 2021 Jobs 0
YIHR waxay raadineysaa Khabiir ku takhasusay Dhismaha Nabadda iyo Waxbarashada si ay u taageeraan Waxqabadkooda Dib-u-heshiisiinta iyo Is-beddelka Khilaafka (RCT) ee Kosovo. Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: July 16. [sii wad akhriska…]